देउवाले भने- मेरो नेतृत्वमा भए सहमतीय नभए बहुमतीय सरकार
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अब बन्ने नयाँ सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आव्हान गरेको सर्वदलीय छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै देउवाले भने,‘मेरो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न नसके बहुमतीय सरकार बन्छ।’
काठमाडौं महानगरकी एक्ली महिला वडाध्यक्षको कथा
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, जेठ १६ -
भान्छा समानताको एउटा बिम्ब हो भने घरमा शोभा र उनका श्रीमान दुवै बराबरी देखिन्छन्। राजनीतिमा भने शोभा अगाडि छिन्। उनी एमाले जिल्ला कमिटीकी सदस्य हुन् भने सोमनाथ वडाको सचिव पद सम्हाल्छन्। अर्थात्, पार्टीको माथिल्लो तहमा शोभाकै निर्णय चल्छ। अब त झन् सिंगो वडाकै जिम्मेवारी थपिएपछि घरको धेरै जिम्मा सोमनाथकै हातमा जाँदैछ।
कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नेताहरु आएनन्
सन्जिब बगाले, काठमाडौं, जेठ १६ -
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्नका लागि भनेर पत्र पठाइएको रहेछ। यो पत्र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहनेका लागि मात्रै होला’, ढकालले भने, ‘हामीलाई झुक्किएर आएको होला भनेर हामी बैठकमा गएनौ। हामी त्यो बैठकमा जानुको केही औचित्य छैन। राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि होइन।’
तपाईंको गाउँ/नगर/महानगरपालिकालाई कति बजेट पर्‍यो ? हेर्नुहोस् सूची
एमाले अध्यक्ष ओली भोलि भरतपुर जाने
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौँ, जेठ १५ -
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनामा मतपत्र च्यातिएपछिको स्थिति बुझ्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मंगलबार चितवन जाने भएका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न अध्यक्ष ओलीसहितको टोली चितवन जान लागेको हो।
दाङमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सहमति, केसीको अनसन स्थगित
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, जेठ १५ -
दाङमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारले अवधारणापत्र अघि बढाएपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सोमबारबाट बस्ने भनेको अनसन स्थगित गरेका छन्। दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न दुई वर्षअघि नै सहमति भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
कानुनी छिद्रबाट छिरेर भरतपुरमा पुन: मतदान गराउने माओवादी नियत
रोहित खतिवडा, काठमाडौं, जेठ १५ -
यो वडामा कांग्रेसको पकड बलियो भएकाले दुई उम्मेद्वारको मतान्तर तीन सय हाराहारीमा झर्ने कांग्रेस-माओवादीको आकलन थियो। तर, १८०० मत गन्दा दाहालको पक्षमा ज्ञवालीको भन्दा ५१ मत मात्रै धेरै पर्‍यो। बाँकी ६ सय मतबाट सात सय भन्दा धेरैको अन्तर तीन सयमा झर्न सम्भव थिएन। यो वडाको मतगणना सकिँदा दाहालले ज्ञवालीसँगको मतन्तार एक सय जति मात्रै कम गर्न सक्ने देखिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्न निवेदन दर्ता
सन्जिव बगाले, काठमाडौं, जेठ १५ -
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बजेट प्रस्तुत हुन नदिने चेतावनी दिएपछि सत्तारुढ घटकले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिन निवेदन दिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत हुँदै (LIVE)
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक बजेट पेश गरिरहेका छन्। एमालेको संसद अवरोध गर्ने चेतावनीका कारण निर्धारित समयभन्दा एक घन्टा ढिला गरी बजेट प्रस्तु गर्न लागेका हुन्।
एमालेको अवरोधले बजेट अनिश्चित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बजेट अनिश्चित भएको छ। सरकारसँग यसअघि भएको सहमति अनुसार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने भनेपछि बजेट अनिश्चित भएको छ।
राजपालाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति एक साता पर सार्दै असार ९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले दिएको सुझावका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचनको मिति तय गरेको हो।
भरतपुर मतगणनाबारे आयोगले बनायो तीन सदस्यीय छानविन समिति, १७ गतेसम्म प्रतिवेदन अाउने
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं जेठ १५ -
निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरको मतपत्र च्यातिएको घटनाबारे छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। तीन सदस्यहरुमा सहन्यायाधिवक्ता गीता प्रसाद तिमिल्सना, गृहका एक सहसचिव र एक डिआइजी रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
नारायण महर्जन, काठमाडौं, जेठ १५ -
गणतन्त्र दिवस–२०७४ आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । झन्डै अढाइ सय वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
भरतपुरमा एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप
उनले आफूले जित्ने निश्चितजस्तै भएपछि आत्तिएको एमालेले सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातेको आरोप लगाइन्। ‘मैले लिड गर्ने अवस्था आएको थियो, आफू हार्ने भएपछि एमालेले षड्यन्त्रपूर्वक मतपत्र च्यात्ने काम गरे’, रेणुले भनिन्, ‘एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजियो ।’
भरतपुर घटनाबारे छलफल गर्न आयोगको बैठक बस्दै
चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले त्यहाँको अवस्था जानकारी गराइसकेका छन्। अब मतगणना अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आयोगको बैठक बस्न लागेको आयुक्त नरेन्द्र दाहाललाई जानकारी दिए।
हामीलाई नै ज्यान जोगाउन मुस्किल भयोः भरतपुरका निर्वाचन अधिकृत
‘राति पौने १२ बजेतिर म बाथरुम जान भनी उठें, त्यतिञ्जेल सामान्य रुपले मतणना भइरहेको थियो’, न्यौपानेले टेलिफोनमा सेतोपाटीसँग भने, ‘म बाथरुम नपुग्दै मतगणनास्थल रणभूमिमा परिणत भयो। एक मिनेटभित्रै सबैथोक भइसकेकाले कसले के गर्यो भन्ने मेसो पाइएन, हामीलाई नै ज्यान जोगाउन मुस्किल भयो।’
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पदक पाउनेको नाम सार्वजनिक भएको छ। गृह मन्त्रालयले मानपदवी, अलंकार पदक पाउनेहरुको नाम आज घोषणा गरेको हो। पदक पाउनेहरुलाई एक वर्षपछि राष्ट्रपतिले सम्मानित गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाल रत्न पदकबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (मरणोपरान्त) लाई दिइने गृहले जनाएको छ भने राष्ट गौरव पदकबाट महेन्द्रनारायण निधि मरणोपरान्तलाई दिइने छ।
मतगणनाको अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसकी साझा उम्मेदवार रेणु दाहालले नेकपा एमालेका देवी ज्ञवालीसँगको प्रतिस्पर्धामा मतअन्तर सोचेजस्तो घटाउन नसकेपछि माओवादी कार्यकर्ताहरू हुलदंगामा ओर्लिएका हुन्। मतगणना स्थलमा सहभागी माओवादी प्रतिनिधिहरूले नै मतपत्र च्यातेर अवरोध खडा गरेको अन्य दलका प्रतिनिधिले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार मतपत्र च्यात्ने केही माओवादी कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको छ।
सेतोपाटी संवाददाता , काठमाडौँ,जेठ १४ -
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार रातीसम्म बसेको तीन प्रमुख दल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच सम्पन्न वैठकले दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सात दिन सार्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाअभियोग अघि नबढाउन निवेदन
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौँ,जेठ १४ -
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरुले नै त्यसलाई स्थगित गर्न सभामुख ओनसरी घर्ती समक्ष निवेदन दिएका छन्। आइतबार दिइएको निवेदनमा वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखि उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ।
सत्तारूढ दल र एमालेसँग बसेको राजपा बैठक निष्कर्षविहिन
काठमाडौं, जेठ १४ -
संविधान संशोधन, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यथास्थितिमा संविधान संशोधनका पक्षमा दुईतिहाई बहुमत पुग्न कठिन रहेको र स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको मिति नजिकै आएकाले निर्वाचनपछि संविधान संशोधन पारित गरेर अघि बढ्ने गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठेर एक भोट मात्रै! हेर्नुहोस् कसले कति पाए?
काठमाडौं, जेठ १४ (सेतोपाटी) -
मेयरमा कडा टक्कर दिने ठानिएका नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशी भने कमजोर सावित भए। उनी झन्डै २० हजार मतान्तरमा पराजित भए। नयाँ पार्टीका रूपमा उदाएका साझा पार्टीलाई विवेकशील नेपालीले पछाडि पारेको छ। काठमाडौंको मेयरमा २८ उम्मेदवारमध्ये १७ जना उम्मेद्वारले १०० मत भन्दा कमी ल्याए। जित्ने विद्यासुन्दरले ६४ हजार ९ सय १३ मत ल्याउँदा मेयरकै एक प्रत्यासी भगवान गिरीले १ भोट मात्रै पाए।
रोहित खतिवडा, काठमाडौं, जेठ १४ -
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, जेठ १४ -
भरतपुर महानगरपालिकामा ६ हजार मत गन्न बाँकी रहँदा एमालेका मेयर उम्मेद्वार देवी ज्ञवाली र कांग्रेस-माओवादीकी संयुक्त उम्मेद्वार रेणु दहालबीच हजार भन्दा कम मतान्तर बन्दै गएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार ज्ञवालीले ४० हजार ९ सय ८० मत ल्याएका छन् भने रेणुले ४० हजार १ सय १६ मत पाएकी छन्। उनीहरुको मतान्तर ७८४ पुगेको छ।
काठमाडौंको मेयरमा एमाले यसरी उदायो
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (एमाले) का विद्यासुन्दर शाक्य ६४ हजार ९१३ मत प्राप्त गरी विजयी भए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २६९ मत प्राप्त गरे।
२० हजारभन्दा बढी मतान्तरमा चुनाव जित्ने यी हुन् महानगरका उम्मेद्वार
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमाले भारी मतान्तरले विजयी भएको छ। महानगरमा हालै भएको अन्तिम नतिजा अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले ६४ हजार ९ सय १३ मत ल्याएर विजयी भएका छन्। निटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २ सय ६९ मत ल्याएका छन्।
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, जेठ १३ -
दमक मेयरमा केपी ओलीका भतिजासहित झापामा एमालेले उम्मेद्वारी टुंग्यायो
विनोद सापकोटा, झापा, जेठ १३ -
पन्ध्र वटा स्थानीय तह रहेको झापामा नेकपा एमालेले दुई वटा तहको अध्यक्ष पदमा महिलासहित १३ वटा तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदको उमेद्वारको नाम अन्तिम टुंगो लगाएको छ।
ती दुई तहको उपाध्यक्षमा पुरुषको नाम तय गरिएको पार्टी श्रोतले वताएको छ । अन्य १३ वटा तहको प्रमुख पदमा पुरूष र उपप्रमुखमा महिलाको नाम चयन गरको छ । महिला प्रमुख भएको तहमा भने उपप्रमुखमा पुरुषको नाम तय गरको छ।